30 michina yekunze yekutengesa munyika, wakamboshandisa izvozvo? -Kambani Nhau-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co, Ltd.
30 michina yekunze yekutengesa munyika, wakamboishandisa here?
Views:17 Author: Shambadzira Nguva: 17 Origin:
Iwe unofunga kuti kune chete zvinwiwa mumakambani ekutengesa? Iko kukanganisa kukuru, makeke, mateki, makamba, fodya, caviar, mabara egoridhe… Zvinongoerekana zvisingatarisirwi, zvisingawanikwe.
Heano makumi matatu emuchina wekutengesa michina iyo Bhizinesi Insider inounganidza nekuparadzira kutenderera pasirese.
1. Mumigwagwa yeNew York, Los Angeles neDallas, kune maawa makumi maviri nemaviri emakeke anotengesa michina. Unogona kutenga makeke anonaka senge chokoreti marshmallows nemakadhi echikwereti.
2. Mushini wekutengesa wemakakanje ane mvere nyowani anogona kuwanikwa pachiteshi chechitima chikuru muNanjing, China. Ichi zvakare chirarame chembanje yekutengesa muchina muChina, iyo inotengesa avhareji yemazana mazana emakara anorarama pazuva.
3. MuTaiwan, vanhu vanogona kutenga masiki ekurapa kubva kumakina ekutengesa, kunyanya panguva yekubuda kweanvian furuwenza.
4. Munzvimbo zhinji dzepasi, kusanganisira hotera iyi iri ku Abu Dhabi, kune zvakare michina yekutengesa yegoridhe.
5. Isa mari mumushini wekutengesa muTokyo, uye munhu chaiye anokupa zvihwitsi. Kunyangwe zvichipesana nepfungwa yekutengesa otomatiki, zvakare zvinonakidza.
6. MuJapan, vanhu vanogona kutenga kofi yemumagaba mumugwagwa wekutengesa muchina weSuntory.
7. Pfungwa yekuchenesa ganda inogara ichibuda kana iwe uchienda kuchimbuzi uye wozvitarisa mugirazi. Kana iwe uri muHollywood, California, unogona kuenda kuProactive kugadzirisa muchina wekutengesa.
8. Muchina wekutengesa otomatiki wemukaka mbishi wemukaka unogona kuwanikwa pakati peLondon, uko varimi vanowedzera mukaka mbishi kumushini wekutengesa uye vanotengesa iwo chaiwo kubva kumapurazi kuti vadzivise kurambidzwa kwekutengeswa kwemukaka mbishi muzvitoro zveBritish.
9. Kutenga zvihwitsi pamushini wekutengesa wePuerto Rico kunogona kuwana chubhu yemahara yeColgate mushonga wemazino. Panguva imwecheteyo, izwi rekuti "Usakanganwa kukwesha mazino ako" richaratidzwa pachiratidziro cheLED. Colgate inoburitsa mameseji ehutano nenzira iyi.
10. Kumucheto kwekumabvazuva kwedhorobha reVancouver, unogona kuwana mushonga wekutora zvinodhaka sechivako cheveruzhinji kutsiva chekare kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere.
11. Mushure mekuongorora 85% kwevatsigiri vevadzidzi, Yunivhesiti yeSpensburg, Pennsylvania, yakaunza michina yekutengesa zvinodhaka muPlan B, uye zvimwe zvikoro, sePomona College, zviri kukwikwidza kutevedzera.
12. Magetsi emagetsi anotengesa mari muBritain akagadzwa mune cafe padyo neSmall Silicon Valley Technology Center muEast London munaKurume 2014. Kuburikidza nemuchina uyu wekutengesa, Bitcoin inogona kuchinjaniswa nemari yepepa.
13. MuLos Angeles, vanhu vane nzara vanogona kutenga mabhanzi eMexico anopisa akagadzirwa kubva kumashini ekutengesa madhora matatu, kusanganisira masoseji eSpanish, mbatatisi dzakabikwa, bhekoni rekutanga, mbatatisi uye nyama yemombe yakakangwa.
14. Kambani inogadzira ma tortilla eMexico inogadzirawo muchina wekutengesa pizza unoshandisa hovhoni kugadzira pizza yemasendimita gumi mumasekonzi makumi mapfumbamwe.
15. Farmer's Fridge, kutanga kweChicago, inoisa masaladi mumakani akavharika uye oatengesa mumichina yekutengesa, kutanga pamadhora masere.
16. Brooklyn, New York, ine otomatiki yekutengesa muchina inonzi Swap-o-matic, iyo inobvumidza vanhu kutengesa zvinhu zvisingadiwe nezvitsva vasina mari.
17. Inoshandira vatengi vane hunyanzvi, uyu mudzanga wevhegi unotengesa anosvika anosvika makumi maviri neshanu emhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvemhando yepamusoro zviri kunze kwenyika pamitengo iri pakati pe $ 25 kusvika $ 2.
18. Caviar vending muchina muLos Angeles mall inodhura pakati pe $ 5 ne $ 500 paunzi.
19. Champagne inotengeswa mumuchina wekutengesa muLondon. Mabhodhoro ehomwe anokosha $ 29 bhodhoro.
20. Munguva yeNdebe yeNyika ya2014, muchina wekutengesa otomatiki wakaiswa paSao Paulo Metro Station kuti utengese yunifomu yeBrazil Yenhabvu Yenhabvu, ichirerutsa vateveri vanonyanyisa.
21. Hangzhou, China, ine muchina wakakura wekutengesa mota. Izvo zvinongodhura 3 yuan paawa kurendesa mota. Kunyangwe iyo yekumhanyisa iri mamaira makumi mashanu chete, mota dzemagetsi dzinogona kudzora zvakanyanya kusvibisa kwemotokari.
22. California, iyo ine rezinesi rembanje yekurapa, ine muchina wekutengesa kannabis, uri nyore sekutenga bhegi remachipisi embatatisi. Inodhura $ 15 kusvika $ 20 bhegi uye inogona kutengwa mushure memaawa mashoma ekunyorwa kweminwe.
23. Coca-Cola Spanish ndimu muto brand Limon & Nad inogona kutengwa nemitengo inoshanduka mumatunhu akasiyana. Muto wendimu unokwanisa kutengwa mumachini anotengesa nemitengo yakachipa munguva inopisa.
24. MuFrance, mubiki wechingwa akaunza michina miviri yekutengesa matanda. Fans vanogona kutenga matsva matanda maawa makumi maviri nemana chero nguva, kunyangwe husiku.
25. Kupfeka shangu-refu-chitsitsinho kumabiko ehusiku kunogona kurwadza. Kutengesa michina inotengesa shangu dzakapfava, dzakagadzikana muCalifornia neLas Vegas kugadzirisa matambudziko evakadzi.
26. Kuti usimudzire mazuva ekumhanya, shangu yemitambo brand New Balance, mukubatana neWestin Hotel, yakatanga muchina wekutengesa unotengesa michina yemahara (inoita madhora zana nemakumi mashanu). Vatengi vanofanirwa kunyora pakombuta pamberi pemuchina wekutengesa kuburikidza neTwitter: "Ndinoda [email inodzivirirwa]#National Kumhanya Zuva ".
27. Amazon, e-commerce hofori, yapindawo mumusika wemuchina wekutengesa, ichigadzira michina yeV Kindle Fire pakutengesa paMcCarran Airport muLas Vegas kuti vatengese e-reader nezvimwe zvinhu kuvashanyi vasina varaidzo.
28. iyo isina kujairika yekutengesa muchina haisi chinhu chitsva. Muna 1949, kwaive nemushini wezuva wekutengesa muchina nemazizi ekupfapfaidza, uye masekondi makumi matatu ekupfapfaidza aingoita cendi churu chete.
29. Muzvinabhizimusi wePhiladelphia Marvin Kilgore akahaya michina makumi mana yekutengesa kuti atengese bvudzi revanhu pamarisiti evhudzi evakadzi, anokosha pakati pemadhora makumi matanhatu nemadhora mazana mashanu emadhora.
30. Kambani iri muTurky yakaparura otomatiki vending muchina uyo unotengesa mabhodhoro anogona kushandiswazve nechikafu chembwa nemvura. Kana mabhodhoro epurasitiki akaiswa mumushini, chikafu chembwa nemvura zvinoyerera kunze kubatsira imbwa dzakarasika. Zoomgu inoitisa iyo OEM kugadzirwa kwemhando dzakagadziriswa michina,
kubva pamadhirowa dhizaini yekuenzanisira kugadzirwa,
wozoenda kugadzirwa kwakawanda, pamwe nekuvandudza chirongwa, kumira,
chitarisiko runako, muchina mashandiro,
isu tichapa imwechete-yekumira yekutsigira masevhisi.
Michina dzese dzinogona kugadzirwa muZoomgu
Prev: How kusarudza Vending michina?
Zvadaro: Unmanned shopu, ndeapi matambudziko emakambani emakambani anofanirwa kutarisisa!